ဒီနှစ်မွေးနေ့ကို မန္တလေးက ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေပိုးအိမ် - Cele Gabar
ဒီနှစ်မွေးနေ့ကို မန္တလေးက ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူ ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်
By RainowPosted on July 15, 2020
မင်းသမီးချောလေးရွှေပိုးအိမ်ကတော့ ပရိသတ်ကို အလေးအနက်ထားဆက်ဆံတတ်ရုံမက အလှူအတန်းရက်ရောသူတစ်ယောက်မို့ အားပေးသူအမာခံပရိသတ်များစွာပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ လာမယ့် သြဂုတ်လထဲမှာတော့ ရွှေပိုးအိမ်ရဲ့ မွေးနေ့ရှိသလို မွေးနေ့တိုင်းကို ပရိသတ်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းလေ့ရှိတဲ့ရွှေပိုးအိမ်ကတော့ ဒီနှစ် မွေးနေ့လေးကို မန္တလေးမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
” (၁၅.၈ .၂၀၂၀) ရွှေပိုး အသက် (၂၈) နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာ မန်းလေးမှာ ရှိနေပါမယ်… မန်းလေး၊စစ်ကိုင်း၊ကျောက်ဆည်၊မုံရွာ၊ ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်…. ဒီစာလေးရေးရင်းနဲ့ကို မျက်ရည်ဝဲနေမိတယ်…. ရွှေပိုးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ လာချင်တဲ့သူတွေရှိရင် လာခဲ့မယ်လို့ မန့်ခဲ့ပေးပါ… မွေးနေ့ပွဲမလုပ်ပါဘူး….. ဖန်တွေနဲ့ ကိတ်အတူတူ ခွဲကြမယ်… ပျော်ကြမယ်နော်…. ရွှေပိုး မန်နေဂျာ မကလျာ 09428322069… ဖုန်းဆက်ပြီး လာမယ့်အကြောင်း ကြိုပြောလို့ရပါတယ်” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ရွှေပိုးကတော့ နှစ်စဉ် သူ့မွေးနေ့တိုင်းမှာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က အမာခံပရိသတ်တွေနဲ့ ဆုံလေ့ရှိသော်လည်း ဒီနှစ်မှာတော့ ကိုဗစ်ကြောင့် နယ်ဝေးကလူတွေနဲ့ မဆုံနိုင်တော့တာကြောင့်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်မွေးနေ့ မန္တလေးမှာရှိနေမှာဖြစ်လို့ မန္တလေးနဲ့အနီးတဝိုက်က ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူ မွေးနေ့ကို ဖြတ်သန်းသွားမယ့်အကြောင်း မျှဝေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source – Shwe Poe Eain
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Shwe Poe Eain, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ, ရွှေပိုးအိမ်
Previous post Follower (၅)သိန်းပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သဇင်ထူးမြင့်
Next post မိခင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ခြေရာတောင်းခံခဲ့တဲ့ ဖုန်းသီရိကျော်